MITOMBO be izao ny olona manatona ny fandaminan’i Jehovah, ka vao mainka ilaina ny Efitrano Fanjakana, Efitrano Fivoriambe, trano fanaovana sekoly, biraon’ny fandikan-teny mitokana, ary tranon’ny sampana. Natsangan’ny Filan-kevi-pitantanana àry ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana Eran-tany (SFE), tamin’ny Oktobra 2013. Te hitsitsy vola izy ireo, nefa tiany ho vita tsara ny asa fanorenana. Tafiditra amin’izany ny manao planina, manavao trano, ary mikojakoja azy ireny. Any amin’ny foibe any Brooklyn, any New York, no misy an’io sampan-draharaha vaovao io, ary ny Komitin’ny Fampanontana ao amin’ny Filan-kevi-pitantanana no miandraikitra azy.
Ny SFE no miandraikitra ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana Amin’ny Tany Maromaro. Samy misy an’io sampan-draharaha io any amin’ny sampan’i Afrika Atsimo, Alemaina, Aostralia, ary Etazonia. Inona no andraikitr’io sampan-draharaha io? Mandamina ny asa fanorenana any amin’ny faritra iandraiketany avy, ka tafiditra amin’izany ny manao planina sy mikojakoja trano. Ny hahavita Efitrano Fanjakana maro sy haingana be no tanjony. Ilay fandaharana natao hanampiana ny tany mahantra no nahafahana nanorina Efitrano Fanjakana taloha. Teo koa ny asan’ny Komitim-paritra Momba ny Fanorenana. Natambatra anefa izao ireo fandaharana roa ireo mba ho vita haingana kokoa ny asa.
Natsangana tany amin’ny sampana rehetra ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana eo An-toerana. Mihamaro mantsy ny Efitrano Fanjakana sy Efitrano Fivoriambe ilaina, ka io no hanara-maso ny fanorenana an’izany. Mandefa tatitra mivantana any amin’ny Komitin’ny Sampana eo an-toerana io sampan-draharaha io. Azon’ny biraon’ny sampana rehetra atao koa izao ny manendry mpanao fanorenana mba hanampy amin’izay tetikasa misy.
Tetikasa lehibe 270 mahery no mbola nilaina natao, tamin’ny Aprily 2014. Anisan’izany ny fanorenana biraon’ny fandikan-teny mitokana 90, Efitrano Fivoriambe 35, ary tranon’ny sampana 130. Nisy 14 000 mahery koa ny Efitrano Fanjakana nila naorina na nila nohavaozina tanteraka.
Hita hoe tafaray ny vahoakan’i Jehovah, satria na dia samy hafa fiaviana sy kolontsaina ary fiteny aza izy ireo, dia manao soroka miara-milanja mba hamitana an’ireny trano ireny. Manome voninahitra ny anarana masin’i Jehovah izany sady manatanjaka finoana. Hoy i Dan Molchan, miasa ao amin’ny Biraon’ny Komitin’ny Mpiasa, any amin’ny foibe: “Mbola be dia be ny asa tokony hovitaina. Ankasitrahanay àry ireo rahalahy sy anabavy rehefa mivavaka ho an’ilay asa sady manohana ara-bola. Fa ny tena mahafaly anay dia ireo rahalahy sy anabavy manampy an-tsitrapo amin’ilay tetikasa.”
TETIKASA LEHIBE 270 MAHERY NO MBOLA NILAINA NATAO, TAMIN’NY APRILY 2014. ANISAN’IZANY NY:
Biraon’ny Fandikan-teny Mitokana 90
Efitrano Fivoriambe 35
Tranon’ny Sampana 130
Nisy 14 000 mahery koa ny Efitrano Fanjakana nila naorina na nila nohavaozina tanteraka.
Fanorenana Efitrano Fanjakana any Amin’ny Toerana Mitokana
Jereo ny fomba nanorenan’ireo ekipa dimy Efitrano Fanjakana roa tao anatin’ny 28 andro.
Avy Aiza ny Vola Ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah?
Jereo hoe nahoana no mandroso foana ny asa fitoriana maneran-tany nefa tsy misy fanantazan-drakitra sady tsy misy ampahafolon-karena.